सबिता भण्डारीले न्याय नपाउदै भक्तपुरमा फेरी घट्यो यस्तो घटना (भिडियो सहित) – UPDATE LINK
सबिता भण्डारीले न्याय नपाउदै भक्तपुरमा फेरी घट्यो यस्तो घटना (भिडियो सहित) भिडियो अन्तिममा छ
मैले कहाँ गएर न्याय पाउनु ? अहिले सम्म मेरो छोरोका अत्तोपत्तो छैन । एउटै छोरा थियो । धेरै जना थिए । केही मान्छेको आवाज सुनेकाले उनीहरुलाई चिनेकी छु । अहिले सम्म घटना भएको यति समय भइसक्यो तर कसैले मेरो कुरा सुनेन ।
मेरा दिदी बहिनी सबै बाहिर हुनुहुन्छ, सबैलाई सोध्नुहोस् म कस्तो महिला हो ? सबै मिलेर मलाई यस्तो बनाए । मेरो मोवाइल र पैसा पनि हराएको छ । मैले मोवाइल हरायो भन्दा तँ खातेसंग पैसा र मोवाइल हुन्छ ? तैंले झुटो बोलिस् भनेर प्रहरीकै अगाडी यस्तो भनिन् ।